Alshabaab oo sheegatay in weerarkii Gaalkacyo ay ku dileen Cabdiweli Cilmi – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Alshabaab oo sheegatay in weerarkii Gaalkacyo ay ku dileen Cabdiweli Cilmi
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar isugu jiray qaraxyo iyo mid toos ah oo saaka waaberigii hore lagu qaaday xarun uu Koofurta magaalada Gaalkacyo ka degenaa Wadaad muran badan ka dhex dhaliyay bulshada, kaasoo lagu magacaabi jiray Sheekh C/weli Cali Cilmi Yare.
Qaraxyo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari ayaa lagu weeraray xarunta wadaadka, iyadoo qaraxa kaddib ay xarunta gudaha u galeen dabley hubeysan.
Sheekhan oo muran badan ka dhex dhaliyay bulshada Soomaaliyeed, markii baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal uu ka soo muuqday iyo sawir uu la meel dhigay Nabi Muxamed (NNKH), waxaana Maxkamad la soo taagay sanadkii hore ay sii deysay, kaddib markii uu iska fogeeyay inuu Nabinimo sheegtay ama uu sawiray Nabi Muxamed (NNKH), isagoo sheegay in sawirka uu ahaa macalinkiisa.
Previous Dawladda Puntland waxay la wadaagaysaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland in ay tahay libin sheegasho beena, sheegashada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku sheeganayso inay ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo lacag dhan $1500,000.00 (Hal Milyan Iyo Shan Boqol oo Kun oo Doolar).
Next Faaf faahinta Qaraxyadii Saaka ka dhacay Magaalada Gaalkacayo